တရုတ် ALT-A အော်တိုတံဆိပ်တပ်စက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ |ညှိထားသည်။
ပုလင်းအဝိုင်းအတွက် ဤတံဆိပ်ကပ်စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ မွမ်းမံထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိပြီး လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူသည်။ပုလင်းများနှင့် အညွှန်းစာရွက်များ၏ မတူညီသော အရွယ်အစားနှင့် လက္ခဏာများအလိုက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို အဆင့်ဆင့် ချိန်ညှိရပါမည်။အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်များအတွက် ပုလင်းအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်၊ ၎င်းကို တစ်ဖက်သတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ နှစ်ထပ်ဖြစ်စေ၊ ဘူးခွံနှင့် ပုလင်းပြားများအတွက် အကြည်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရခြင်းမရှိသော ကော်တံဆိပ်ဖြစ်စေ ပုလင်းပြား သို့မဟုတ် အခြားကွန်တိန်နာများအတွက် သုံးစွဲသူများ စိတ်ကျေနပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
20-45mm သို့မဟုတ် 30-70mm
± 1 မီလီမီတာ
ဘယ် → ညာ (သို့မဟုတ် ညာ → ဘယ်)
ဤစက်ပစ္စည်းသည် ဆေးပုလင်းများ၊ ဆေးရည်များ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်များ၊ ပုလင်းပြားများ၊ လက်သန့်ဆေးအဝိုင်းပုလင်းများနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ ဘေးထွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ဘေးထွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော စက်စီးရီးတွင် ပါဝင်သည်။
ဤစက်ပစ္စည်းကို သီးသန့်စက်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် အခြားစက်ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ကုဒ်နံပါတ်စက်ဖြင့် အသုံးပြု၍ အီလက်ထရွန်းနစ် ကြီးကြပ်ကုဒ်၊ ထုတ်လုပ်သည့် ရက်စွဲ၊ အတွဲနံပါတ်၊ ဘားကုဒ် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ နှစ်ဖက်မြင်ကုဒ် ဘားကုဒ် လမ်းကြောင်းရှာဖွေနိုင်မှုစနစ် စသည်ဖြင့် တံဆိပ်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်များ၏ အမြင်အာရုံ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိရန် ထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီနိုင်ပြီး ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှု စက်ရုပ်ကို ဘောက်နှင့် ရေစုန်ထုပ်ပိုးမှုတွင် ဘောက်စ်အဖြစ် တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
1. စက်ကိရိယာသည် ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုရှိပြီး မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ကပ်ခွာခြင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ချိန်ညှိနိုင်သည်။
2. ပစ္စည်းကိရိယာများသည် တံဆိပ်ကပ်ခြင်း တိကျမှုမြင့်မားသည်။စက်ပစ္စည်းများသည် တံဆိပ်များကို ပေးပို့ရန်အတွက် stepper motors သို့မဟုတ် servo motors များကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းသည် တိကျပြီး ထိရောက်ပြီး လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တံဆိပ်များကို ဘယ်နှင့်ညာသွေဖည်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ခြင်းမရှိကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်များကို ကွဲလွဲစေသော ပြင်ဆင်မှုပုံစံရှိသည်။
3. စက်ပစ္စည်းသည် ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံသည်၊ ဖရိန်ကို အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ စက်ကိရိယာများ၏ တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် သုံးဘားချိန်ညှိမှု ယန္တရားအား လက်ခံထားသည်။
4. စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တင်သွင်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုထားပြီး အရည်အသွေးကို စိတ်ချယုံကြည်ရသည်။
5. ရိုးရှင်းသော ချိန်ညှိမှုနှင့် လူသားဆန်သော ဒီဇိုင်းသည် စက်ပစ္စည်းများကို လွတ်လပ်စွာ ချိန်ညှိမှု၏ မြင့်မားသော ဒီဂရီကို ရရှိစေပြီး မတူညီသော ထုတ်ကုန်များကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး မြန်ဆန်ပါသည်။
6. စက်ပစ္စည်းများသည် ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် ပုလင်းထောက်ပံ့ကြေးတံဆိပ်မပါသော၊ အလိုအလျောက် ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ခြေရာခံခြင်းကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာများကို ထက်မြက်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ယခင်- ALC စီးရီး Automatic Capping Machine
နောက်တစ်ခု: SL စီးရီး အီလက်ထရွန်းနစ် တက်ဘလက်-ဆေးတောင့် ကောင်တာ
ALF စီးရီး အလိုအလျောက် ရေဖြည့်စက်
ALFC စီးရီးများ အလိုအလျောက် အရည်ဖြည့်ခြင်းနှင့် ထုပ်ခြင်း မွန်...
ALY စီးရီး အော်တိုမျက်စဉ်း ဖြည့်ခြင်း Monobloc